Ny lasa, (tsy) fanadino | NewsMada
Hotsarovana amin’ity anio ity ny faha-41 taona nahafatesan’ny Jjneraly Ratsimandrava Richard, filoham-pirenena malagasy, tamin’izany fotoana izany. Raha tsiahivina fohy, herinandro ny nitondrany ny firenena dia lavo izy. Notifirin’ny fahavalom-pirenena, teny Ambohijatovo, rehefa iny hamonjy ny trano fonenany iny.
Ny lasa, tsy fanadino satria nanamarika ny tantaram-pirenena izany. Izy mantsy no filoham-pirenena, voalohany nisy namono teto Madagasikara. Fanalana ny ainy izany, nanonganana azy teo amin’ny fitondrany. Misy ny fanamarihana sy fahatsiarovana izany, na tsy mahoraka loatra aza. Toa vitsivitsy ihany sisa mahatsiaro izany fa tsy mahalala akory ny fisian’ny tantara ny ankamaroany. Anisan’ireo tsy mahafantatra izany tranga manan-tantara izany ireo taranaka ankehitriny, eny fa na nampidirina ho anisan’ny taranja ianarany ary hanadinana azy ireo aza izany.
Na izany na tsy izany, adidin’ireo tomponandraikitra sy raiamandreny, niaina izany ny zava-niseho, tamin’izany fotoana izany, ka mbola velon’aina ankehitriny, ny mampahafantatra amin’ireo taranaka aty aoriana ny seho satria ny lasa mantsy, tsy fanadino, indrindra fa ny tantaran’ireo filoham-pirenena, mba tsy hitenitenenany foana na hamadihany ny tantara. Anisan’ny fampahatsiahivana izany tantara izany koa izao ny dinika manokana nifanaovan’ny gazety Taratra, tamin’ny jeneraly Ramakavelo, mitantara izay niainany sy izay fantany manodidina ity “Raharaha Ratsimandrava” ity. Jereo ao amin’ny pejy faha-6 sy faha-7.
Misy koa anefa tranga tokony hohadinoina, amin’ny fiainana, na eo amin’ny trangam-piarahamonina.
Etsy andaniny, misy koa ny lasa tokony hohadinoina, toy ny fifanenjehana, teo amin’ny mpitondra sy ny mpanohitra. Tsy mila hotadidina akory satria tsy mitondra fampandrosoana eo amin’ny firenena, indrindra moa fa ho an’ny taranaka. Raha hifamaly faty lava eto mantsy, hanome lesona ratsy ho an’ny taranaka. Ny lasa, homban’ny lasa; ny hoavy no banjinina.